SWMC-380-DTH Pneumatic Drilling Rig |
SWMC-380-DTH ndeyepamusoro-inoita split-type pneumatic drilling rig yakagadziridzwa uye yakagadzirwa neSWMC Drilling Rig zvinoenderana ne "inodhura-yakaderera, yepamusoro-soro" zvinodiwa zveindasitiri zveindasitiri yekuchera.
SWMC-380-DTH inobatanidza tekinoroji yepamberi yeiyo ikozvino split pneumatic drilling rig. Iyo prototype yakapfuura anopfuura 3000 maawa ekuparadza maitiro ekuedza uye mana emhando dzebvunzo dzemumunda munzvimbo dzakasiyana dze geological. Yakavandudza kupfuura 10 mechanical loopholes. Pakupedzisira, matambudziko matatu akakosha ehunyanzvi ekare "yepamusoro yekutadza mwero, kushandiswa kwemhepo yakakwira, uye mutengo wekushandisa wakakwira" weiyo split-type pneumatic drilling rig yakagadziriswa. Mhedzisiro ndeye nyore-kushanda-yepasi-yekugadzirisa kupatsanurwa-mhando pneumatic drill ine mutengo wakaderera wekugadzirisa, yakaderera mhepo zvinodiwa, uye yakakwirira yekuchera.
Chimiro chemukati chinonzwisisika uye chiri nyore kuchengetedza. Musoro we rotary unotsiviwa neyakakwidziridzwa yekukatyamadza, iyo inogona kuderedza maitiro ekuita simba rekuchera. Iyo giya-mhando inotenderera mota ine kukurumidza kumhanya, hombe yekutanga torque, kukurumidza kutanga uye kumira, uye yakavimbika. Iyo ine yakawandisa kudzivirira uye yakaderera tembiricha inokwira yebasa renguva refu.
2. Chassis yakasimba
Iyo yakakwirira-simba rekumhanya mashandiro inopa simba uye kusimba kwemuchina wese. Nzvimbo dzemavhiri ekutyaira, mavhiri ekutungamira, track rollers, uye track pads zvese zvinonyanya kusapfeka. Kutyaira kwakasimba uye kuchinjika kwakanaka, zvichiita kuti midziyo ishandiswe munzvimbo dzakaoma Chengetedza chimiro chekufamba chakadzikama. Shandisa imwe-nguva mafuta ekuzora kudzivirira kunetesa kwekugara uchigadzirisa uye kugadzirisa panguva yekushandiswa.
Iyo ergonomically yakagadzirwa yakasanganiswa control console inobatanidza hydraulic actuators, drilling masisitimu, nezvimwe munzvimbo imwe kuti iwedzere kushanda uye kushanda zvakanaka. Muviri wacho wakashongedzerwa neinopengeka inodhirika operation pedal kuti isangane nezvinodiwa zvemunhu mumwe chete oparesheni.
4. Robhoti ruoko
Chimiro chitsva cheMechanical arm Mechanicha inowedzera nzira yekuchera uye yekushanda siyana kuburikidza neshanu coupling michina uye hydraulic oiri silinda. Ngoro yakawedzerwa, manganese simbi inotsvedza njanji uye akawanda-boka roller dhizaini skateboard inogona kumira hombe torque, kuramba deformation, uye kuwedzera hupenyu hwesevhisi yengoro.
Kuchera gomba dhayamita 90-165mm
Max air pressure chaiyo 2.5Mpa
Kushandiswa kwemhepo 1.73/0.3Mpa m³/min
Kushandura torque 2000N.m
Kutendeuka kumhanya 70Rpm
Kusundira kureba 3980mm
Maximum kusunda simba 11KN
Sliding frame swing Kuruboshwe 47°/Kurudyi 54°
Drilling boom swing Kuruboshwe 40°/Kurudyi 40°
Drilling boom pitching yakachinjika 23°/46°
Kugona giredhi 35°
Kudyisa mota simba 3.8Kw
Zvakapfuura: SWMC-370-DTH yakatsaurwa inokambaira yakasungirirwa pamusoro pe hydraulic pasi-iyo-gomba rekuchera rig
Zvinotevera: SWMC-T45 Yakazara Hydraulic Yepamusoro Hammer Surface yekuchera rig
Mining Machinery Makambani
Trackless Mining Machina
SWMC-T45 Yakazara Hydraulic Yepamusoro Hammer Surface dril...
SWMC-360-DTH yakatsaurwa inokambaira yakaiswa pamusoro ...
SWMC-370-DTH yakatsaurwa inokambaira yakaiswa pamusoro ...